Sat, Feb 27, 2021 | 16:10:53 NST
प्रम ओलीलाई दिल्लीमा ‘गार्ड अफ् अनर’ (फोटो फिचर)
भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध जनचाहनानुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
​प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच ‘सरप्राइज’ भेटवार्ता
भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार साँझ भेटवार्ता भएको छ ।
​यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण यसकारण छ फरक
राजकीय भ्रमणमा प्रायः राज्यमन्त्रीस्तरबाट स्वागत गर्ने चलन छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो वरियतामा रहेका गृहमन्त्री सिंहले स्वागत गर्नुलाई भारतले ओलीको भ्रमणलाई विशेष रुपमा लिएको छ भन्ने देखाएको छ ।
देशभर कहाँ कहाँ छ सिन्डिकेट ? कहिले होला अन्त्य ?
एकाधिकार प्रणाली अर्थात सिन्डिकेट लागू गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीले गर्ने आन्दोलन नयाँ होइन ।
ओली सरकारका मन्त्रीहरुको प्रतिबद्धता : गफ होइन, काम गरेर देखाउने चुनौती
समृद्धि, विकास र स्थिर सरकारको मुद्दा लिएर चुनावमा होमिएको एमाले माओवादी गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत सहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
श्रीमानले हेला गरेपछि ब्यूटिसियन बनेकी पविताको कमाई मासिक ३० हजार
जसको लागि जन्म घर छाडेर आएँ, उसैले हेला गरेपछि अरुको त झन के आश गर्नु’, पविता भन्नुहुन्छ, ‘समस्याको भूमरीमा रुमल्लिएर लामो समय बिताएँ । बिरामी पर्दा हेरचाह गर्ने पनि कोही भएन । उपचार गर्न ऋण माग्न जादा २० रुपैयाँ गाडी भाडा नभएर ४/५ घण्टा हिँडेको दिन सम्झन्छु अझै । जीवनमा दुःख कष्ट कति खाएँ पत्तो छैन ।
क्रिकेट रंगशाला बनाउन किन हौसिए धुर्मुस ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको २२ वर्ष पुग्यो ।
मयुरसँगै साझा र मेट्रो सेवा आजैदेखि धुलिखेल, प्रहरीको स्कर्टिङमा पनौती (फोटोसहित)
काभ्रे, चैत २१ – अरनिको पूर्व राजमार्गमा १३ वटा यातायात सेवा समितिले यातायात सेवा अवरुद्ध गरेसँगै नयाँ ८ वटा कम्पनीले सवारी चलाउन अनुमति लिएका छन् ।
साहित्यकार जगदिश घिमिरेले मदनकृष्णलाई भन्नुभएको थियो, ‘क्यान्सर उपचारमा लाग्ने पैसाबारे कुरा गर्यो भने धाक लगाएको जस्तो हुन्छ ।’
संसद बाहिरका फुर्सदिला सीपी मैनाली : कार्यकर्ताले समेत भेट्न छाडे
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली पछिल्लो एक दशक खुवै व्यस्त रहनु भयो ।
​मध्यपहाडी लोकमार्गमा आधुनिक सहर बनाउने काम कहाँ पुग्यो ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने भनेर काम सुरु भएको पनि ७ वर्ष बित्यो ।
​प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुन एजेण्डाले प्राथमिकता पाउला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही चैत २३ गतेबाट भारतको ३ दिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
​टुटेका मन जोड्न सांस्कृतिक अभियान (फोटो फिचर)
धनुषा, चैत २० – जनकपुरको जानकी मन्दिर प्रांगणमा सुदूरपश्चिम साहित्य समाजले पश्चिमेली पहिचानसहितको सांकृतिक नृत्य प्रदर्शन गरेको छ ।
कुपन्डोलस्थित सर्वाङ्ग अस्पतालमा ६ महिना लामो किमोथेरापी सकेको एक महिनापछि यशोदा, म र मेरा सहयोगी शुक्रमान तामाङ दिल्लीको रोहिणीमार्गस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा पेट स्क्यान र कोलोस्टोमी क्लोज गर्नका लागि गयौँ ।
​बजारमा बिदा मिलेको पात्रो पाउनुभएन ? यहाँ हेर्नुहोस्
काठमाडौं, चैत १९ – २०७५ सालको नयाँ पात्रो तथा क्यालेन्डर किन्न बजार जाँदै हुनुहुन्छ ? याद गर्नुहोस् बजारमा सबै बिदा समेटिएको पात्रो प्रकाशित भैसकेको छैन ।
​के गर्दैछन् संसद छिर्न नसकेका साना दल ?
थ्रेसहोल्डका कारण धेरै साना दल यसपाली संसद र सरकारबाट बाहिर छन् । चुनाव जिते पनि केही दलका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा मात्र संसदमा छन् । संसद र सरकारमा खासै प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्ने अवस्थामा खुम्चिएका साना दलहरु के गर्दैछन् त ?
बल्खु – कलंकीको जाम : यात्रु बीचबाटोमै ओर्लेर हिँड्छन्, चालक गाडीभित्रै निदाउँछन्
धुलाम्मे भएको कालो ज्याकेट र मुखमा उस्तै धुलो टाँसिएको माक्स लगाएका भोजपुरका सन्तोष कोइराला कलंकीचोकमा भेट्टिनुभयो ।
​तपाईंको प्रदेश सरकारले यसरी ल्याउँदैछ बजेट
नयाँ संरचना अनुसार बनेका प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट बनाउँदैछन् ।
कलंकीको अन्डरपास बनाउने काम सकिनै लाग्यो
काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने मुख्य चोक कलंकी रातदिन व्यस्त हुन्छ ।
कहाँ कहाँ बन्दैछ व्यवस्थित वस्ती ? तपाईंको ठाउँ पनि पर्‍यो कि ?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर अव्यवस्थित वस्ती बसेको वर्षौं बित्यो ।
ट्वाइलेट : लखनपुरको एउटा कहानी
बिहानको झिसमिसेमै विभिन्न समूहमा विभाजित ५० जना गाउँ छेउको खेत र नदी छेउमा पुग्छन् । उनीहरुको साथमा सिठी,पहेलो झण्डा साउण्डबक्स टर्चलगायतका सामग्री पनि हुन्छन् । खेत र चौरको गस्तीमा हिँडेको यो समूहका कारण खुला स्थानमा शौच गर्नेहरुमा भागाभाग हुन्छ ।
​अशक्त गाईको संरक्षणमा जुटेका कृष्णबहादुरको अनौठौ इच्छा
नाम : कृष्णबहादुर कुवँर क्षेत्री । घर : सुन्दरबजार नगरपालिका–८, कुवँरगाउँ । उमेर : ४९ वर्ष । पढाई : आठ कक्षा उत्तीर्ण । रुचि : रैथाने गाईको संरक्षण गर्नु ।
रहरको अगाडि कस्को के लाग्छ र ?
उहाँलाई साथीहरुले बलिउडकी विद्या बालन जस्तो छस् भन्दा चाँहि मन दंगिन्थ्यो । हो त भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘आँखा उस्तै छ भन्छन्, ज्यानको साइजको कुरा गर्ने हो भने विद्या पातली हुँदा म नि पातली थिए, अहिले उ पनि मोटी म पनि मोटी हा हा हा ।’
​केटाकेटीको लामो छुट्टिले हैरान बनायो ?
ललितपुर थसिखेलकी राधिका पोख्रेललाई अचेल आफ्नो छोरालाई दिनभरि कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।
​सार्वजनिक बिदा कटौतीबारे सिंहदरबार भित्रका कर्मचारीको गन्थन
बिहीबार दिउँसो एक बजे कृषि, भूमी तथा सहकारी विकास मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ कार्यरत एकजना कर्मचारी एक्लै गुनगुन गर्दै थिए ।
एमाले माओवादी एकताले गति लिँदै, कार्यदलको रिपोर्टपछि एकताको मिति तोकिने
काठमाडौं, चैत १५ – लामो समयदेखि अल्मलिएको एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाले गति लिएको छ ।
​विदेशमै तीन छोरा गुमाउन पर्दा रोका परिवारमा बज्रपात
रोका दम्पतीका तीन छोराले वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सुन्दा नै मन थाम्न गाह्रो हुने गरी ‘एकै परिवारका तीन सन्तानको प्रवासमा निधन’ भएपछि यतिबेला रोका दम्पती सन्तान, सहारा र सम्पत्तिविहीन बनेका छन् ।
काठमाडौंका सडकमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट : पैदलयात्रुलाई अलमलसँगै सजिलो
अनामनगरका शिवकुमार रम्तेललाई बानेश्वर चोकमा सडक पार गर्नु थियो । उहाँ ट्राफिकको इशारा कुरेर बसेको १५ मिनेट भैसकेको रहेछ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले वाम एकतामा ल्याएकाे ‘ट्विस्ट’ !
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५०–५० प्रतिशत भागबण्डा नभएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने घोषणा गरेपछि पार्टी एकता हुनेमा आशंका उब्जिएको छ
पार्टीले शहीद घोषणा गर्यो, अनुपा भने शरीरमा रहेको छर्रा निकाल्न सहयोग जुटाउँदै
सोह्र वर्षको कलिलो उमेरमा २०५८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेर युद्धको मैदानमा होमिनुभएकी अनुपा राईलाई युद्धको बेलामा टाउको र छातीमा लागेको गोलीको छर्राले अहिले सताइरहेको छ ।
गुराँसको राजधानी टीएमजेमा एकै पटक ३८ देशका पर्यटक
तेह्रथुम, चैत १३ – तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा एकैपटक ३८ बढी देशका पर्यटकहरु आएका छन् ।
सफलताको कथा : माटोमा सुन भेटेकी पार्वती
मानिसको भिड । लहरै झण्ड्याइएका आकर्षक गहना । गहना देखाउँदै गहनाको बारेमा जानकारी गराइरहन्छिन् पार्वती सुनार । धपक्क बलेका सुनका गहना वरिपरी पार्वती मुस्कुराई रहनुहुन्छ ।
‘तपाईँको बेस्ट टिचरको तलब कति थियो सम्झना छ ?’ यो संवाद हो रानी मुखर्जी अभिनित चलचित्र ‘हिच्की’ को । हामीमध्ये धेरैको जीवनमा एउटा शिक्षकले विशेष भूमिका खेलेका हुन्छन् । हामी ति शिक्षकको तलब याद राख्दैनौँ । हामी याद राख्छौँ त केवल उनले गर्दा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन ।
​देउवा बुढो हुनुभयो, अब नयाँलाई नेतृत्व दिनुपर्छ : चन्द्र भण्डारी
काठमाडौं, चैत ११ – शुक्रबारदेखि चलिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरुले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् ।